Inona no ahafahana manamboatra vokatra tsara vita amin'ny semi-finished toy ny mofomamy manitra ? Mazava ho azy, mofomamy sy malefaka! Raha misy mofomamy ao anaty vata fampangatsiahana, dia afaka manamboatra haingam-pofona haingana ianao.
Puff pastry cookies miaraka amin'ny menaka
dite mangatsiaka - 1 kg;
abrikô na serfa maromaro - 330 g;
Ny atody Chicken, tsy lehibe - 1 pc .;
menaka, menaka - 20 g.
Raha manala ny koba, alaivo ny dity. Nataonay tao anaty paty izy io mba haka ilay siramamy, na hikolokolo miaraka amin'ny blender dia hiverina ho vondron'olona homogenny, fa tsy tokony ho rano. Rehefa atsipy ilay dite mankany amin'ilay sehatra tiana, alatsaho ny menaka fanosotra amin'ny menaka na alaina amin'ny taratasy voajanahary mba tsy hijanonan'ny cookie. Ny atody dia zaraina ho proteinina sy manify, mipaoka tsikelikely. Ny koba dia mikodiadia ho mofo matevina eo amin'ny 3 mm matevina. Raha nividy tapaka efa nokolokoloina ary nokapaina - dia tsara kokoa aza. Nesorintsika tao amin'ny efamira misy tsipika manodidina ny 10 santimetatra ny haavony, teo afovoanay no namelanay ranom-boasary. Ankoatra ny abrikô na kirihitra, ny sokatra, ny peach, ny poma dia tsara ho an'io cookie io. Aorian'izay, ny andaniny roa mifanila amin'ny kianjantsika dia voahosotra amin'ny proteinina ary mamolavola ny koba mba hahazoana ny triatra, hampifandraisina ny tapany tsy voavoatra miaraka amin'ireo voanio. Manaova hoso-doko maivana ary apetraho eo amin'ny fitoeran-jiro ny taolana. Vangio ny zozoro ary alefaso amin'ny bake. Efa vonona ny kitapo rehefa mivadika volamena ary ny fofona fofona matsiro dia mamoha ny olona rehetra amin'ny sakafo maraina.
Tsy voatery foana ny jama, ary tsy ny rehetra no afaka. Noho izany, amin'ny safidy iray, manolotra soso-tsakafo "Cookie" vita amin'ny pasteo siramamy miaraka amin'ny siramamy isika. Ireo cookies toy izany dia azo omena ireo ankizy any an-tsekoly ary hitondra azy eny an-dalana.
Cookies «Ears» avy amin'ny sifotra manitra miaraka amin'ny siramamy
tsaramaso mena fotsy - kely latsaky ny 0,5 kg;
ronono - ¼ cup;
menaka "Farmer" - 1 fonosana;
Ny atody Chicken - 2 pcs .;
Miondrika ny dibera izahay ary apetraho eo an-tànana izany rehefa mamay ny koba izahay, tokony hialoka izany. Ny atody dia mifangaro amin'ny vanilline sy ny antsasaky ny siramamy ary manomboka mifangaro mandra-pahatongan'ny fotoana manjombona ny volom-bolo sy manjelatra, avy eo dia mandatsaka ronono isika ary mandalo tsikelikely ao anaty lafarinina ary mametafeta ny koba. Tokony ho menatra izy io, fa tsy mihetsiketsika, ka mila kelikely kokoa ny lafarinina. Rehefa tsy miforitra amin'ny sisin'ny vilia sy ny tanana ny koba, dia afindra eo amin'ny latabatra, atsangano izany faingam-pandehan-javatra ary mahaloto ny menaka manontolo. Aforeto amin'ny antsasaky, atsangano indray miaraka amin'ny menaka, averina indray ny antsasany ary manindrona tsikelikely. Ny fomba fanoratana sy ny fametahana dia averina in-3 ka hatramin'ny in-10, ary ampifanaraho amin'ny tsirin-tsakafo ilay sarimihetsika ary ataovy ao anatin'ny frizera mandritra ny 10 minitra fara-fahakeliny. Aorian'izay dia manodina indray ny lamba ary mamafaza siramamy ary mialà eo amin'ny sisiny roa mankany amin'ny foibe miaraka amin'ny milina. Ampiasao ny kisary manify, manapaka ny kisoa - manitsy ny haavon'ny tenanao - avy eo manisika ny biskits amin'ny tara fisaka vita amin'ny pergétamie ary 12-18 minitra eo ho eo miaraka amin'ny fatana ao anaty oven.
Raha mampiasa sigara fofom-bary toy ny famonoana ianao, dia mahazo milomano mahasoa sy mahasalama ianao.
Sherbet ny renirano mainty
Sour cake - recipe
Jelly avy amin'ny mena mena - recipe
Mamy mofomamy miaraka amin'ny ronono vita amin'ny ronono - ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny fanosotra sy ny fanosorana tsindrin-tsakafo
Kitapo mofomamy - recipe
Kitapo miaraka amin'ny tantely sy rongony
Cupcakes miaraka amin'ny sôkôla
Cranberry amin'ny siramamy
Cake "Snickers" - recipe
Mpivarotra avy amin'ny mofomamy manitra amin'ny famenoana
Strudel miaraka amin'ny paompy avy amin'ny boaty manitra
Fanamboarana raspberry - fambolena sy fiahiana
Famantarana ny Zodiac Leo - fifanarahana
Ny voankazo amin'ny 16 herinandro
Ahoana no fanaovana kitapo taratasy amin'ny tananao?
Alec sy Hilaria Baldwin dia lasa ray aman-dreny tamin'ny fanintelony
Loko afangaro amin'ny akanjo
Ny Glacier Balmaceda
Inona no mahasoa ny chickpeas?
Strudel amin'ny alokaloka
Fiantohana ny fitaterana amin'ny herinandro 38
Chlorophyllipt ho an'ny zaza vao teraka
Ragged vato ho an'ny fambolena ivelany
Nahoana no mamihina ny faran'ny vavony?
Ahoana ny fomba hanamboarana akorandriaka vy?
40 porofo fa ny fampakaram-bady Rosiana fampakaram-bady - no mafy indrindra eto amin'izao tontolo izao!
Melania Trump milaza fa tsy nanao plastika izy ary tsy nilefitra tamin'i Botox
Canary - fikojakojana sy fikarakarana
Teny etika sy fahalalahana amin'ny fifandraisana raharaham-barotra
Roses avy amin'ny satiny hodibona